Munamato wekupora kuti uwanezve hutano hwako nekukurumidza. ?
Kuporesa munamato kuti udzore hutano hwako nekukurumidzaIzvo zvakauya kuzadza mushonga wevarume. Nekunamata, zvaunoda zvinowedzera kuve zvakasimba kuna Mwari, uyo achawana nzira yakanakisa yekukuporesa.
Uku kurapa kunogona kunge kuchitaura kuna chiremba ari nani, semuenzaniso. Mune zvimwe zviitiko, zvinogona kubuda kubva pakuwanikwa kwekurapa kana mushonga mutsva. Kuporesa kunogona kuuya kunyangwe kuburikidza nechishamiso.
Nekudaro, kuti izvi zviitike, zvinodikanwa kuti uite munamato wekuporesa nesimba rako rose uye ugare wakasimba mukutenda kuti unogona kubuda mumamiriro aya. Optimism ndiyo yakanyanya chombo kurwisa chero chirwere.
1 Kuporesa munamato kuti udzore hutano hwako nekukurumidza
2 Munamato wehutano
3 Chirwere Kurapa Kunamatira
4 Rine simba kuporesa munamato
5 Munamato wehutano hwemumwe munhu.
6 Munamato kuMutumwa mukuru Raphael kukumbira kuporeswa kwechirwere
7 Namata kuna Mukadzi Wedu weFatima kukumbira hutano.
8 Kukosha kwemunamato wekuporesa
Kunyangwe vanachiremba vakatovhura maziso avo kune mikana midiki yekurapa, Hapana chinhu chisingagone kuna Mwari.
Nemunamato wekuporesa unogona kuve nechishamiso chako uye kubvisa chirwere icho chinoita kuti utambure zvakanyanya.
Pamusoro pePisarema 133 nemunamato mukuru Araphael Raphael, ratatoratidza pano, pane zvimwe minamato ine simba yekurapa. Ona pazasi.
“Ishe Baba, ndimi chiremba. Unopa hupenyu neupenyu kune vanokutsvaga.
Ndokusaka nhasi, Ishe, neimwe nzira yakasarudzika, ndinoda kukumbira kurapwa kwezvirwere zvemarudzi ese, kunyanya izvo zvinonditambudza panguva ino.
Ndinoziva kuti haudi zvakaipa, iwe haudi chirwere icho kusavapo kwehutano, nekuti iwe uri Mukurusa Kunaka.
Shanda pandiri kurapwa kwemweya kwakadzika uye, kana uchida, zvakare kurapwa kwemuviri.
Rega iumbirwe zvakananga chiitiko chine simba cheMweya wako Mutsvene kana kuburikidza nachiremba nemishonga!
Wedzera kutenda kwangu muSimba Rako, Ishe, uye muRudo infinito yauinayo ndeyangu. Wedzera kutenda kwangu, Ishe, izvo dzimwe nguva zvisina kusimba.
Ndinotenda musimba renyu rekuporesa, Mwari wangu, uye ndinotenda nekuzvininipisa nekuda kwebasa rese ramuri kuita mumoyo mangu nemuviri izvozvi. Ameni, ngazvive saizvozvo!
Chirwere Kurapa Kunamatira
“Ishe, ndipe hutano kumuviri wangu uye ndinogona kushandira pamwe nehupenyu hwakarangwa kuti ndive wakakodzera rubatsiro rwako.
Ishe, kukudza nekukuzivisa iwe nekutenda nekurumbidza, kuti unondipfumisa zvakadii, pasina kundirega ndichipotsa zvandinoda, korona nekubudirira kukuru nzendo dzese dzisingagare dziri nyore.
Kana ndichikurumbidzai nekuda kwemutsa wakadai, ndinokutendai, Ishe, kwete nemashoko chete, asi pamusoro pezvose nehupenyu hwehutsvene.
Iwe unoranga avo vaunoda, sababa vanoranga mwana anopandukira wavanokoshesa, ndinokutendai panguva dzese dzandaitambura pandainzwa ruoko rwako ruchirova pandiri, asi ndichigara izere netsitsi.
Zvakawanda sei ini zvandakadzidza nekudzidza kubva kwauri, baba!
Hapana chinogona kufananidza rudo rwako.
Nzira dzadzo dzakadyarwa nekudzvanywa kwakawanda, asi avo vanofamba padziri chete ndivo vanonzwa kunakidzwa kwavo kwakasiyana. ”
Rine simba kuporesa munamato
“Ishe Jesu, ndinofunga wamuka uye mupenyu. Ndinofunga uripo mukaramende yeatari kuti undidye; Ini ndinofunga unopindura minamato yevese vanokutsvaga kubva pamoyo. Ndinokuda uye ndinokurumbidza. Ndatenda imi, Ishe, nekuuya kwekuda vanhu.
Hapana anokanganikwa newe, ndiwe uzere muhupenyu hwangu, kwauri isu tinoregererwa, nerubatsiro rwako ndinoshanyira rugare nehutano. Ndivandudze simba rako. Komborerai zvandinoda uye ndinzwireiwo tsitsi.
Ndiporese, Ishe Jesu. Poresai mweya wangu, nokukunda pachivi. Poresa manzwiro angu, vhara maronda akakonzerwa nemaronda angu, kuvenga, kushungurudzika kana kugumbuka.
Kuporesa muviri wangu, nekundipa hutano hwangu.
Nhasi, Ishe, ndinopa kwauri hosha dzandinotambura: (taura chirwere chako zvinonzwika) uye ndinokukumbira kuti uve wakasununguka zvakakwana, senge neavo vakatsvaga iwe pawanga uri pasi redu repasi.
Ndinotenda kuti Shoko rinovimbisa: Iye pachake akatakura zvivi zvedu mumuviri wedu mumuti, kuitira kuti tifire kuzvivi uye tigorarama Kururamisira; namavanga ako wakaporeswa. '(1 Pdr 2,24).
Ndinovimba nerudo rwenyu kwandiri, uye kunyangwe pasina mhedzisiro yekukumbira kwangu, ndinosimbisa nekutenda: Maita basa, Tenzi Jesu, nemaropafadzo amuri kutodururira mandiri.
Munamato wehutano hwemumwe munhu.
“Tenzi wezvese zvakasikwa, musiki wezvinhu zvese.
Ini ndinouya pamberi pehumambo hwenyu panguva ino kuzokumbira rubatsiro kubva kune avo vanorwara nemuviri kana chirwere chepfungwa.
Isu tinoziva kuti kuburikidza nehurwere tinokwanisa kuva nenguva dzekuratidzira, idzo dzinotifadza kwazvo, dzinotiswededza padyo newe, kuburikidza nzira dzekunyarara.
Asi isu tinokumbira kune tsitsi dzake uye timubvunze: tambanudza ruoko rwako rwakajeka kune avo vanorwara, uchirwadziwa kurwadziwa, kusagadzikana uye kusakwana.
Rega rutendo nekuvimba kusimbise mumoyo mako. Kunosunungura kurwadziwa kwavo uye kunovapa rugare uye vakanyarara.
Poresai mweya yavo kuti ibatsire kudzosa miviri yavo.
Vape nyaradzo, sunungura uye vhenekese mwenje yetariro iri mumoyo yavo kuti, nerutsigiro rwetariro nekutenda, vanzwe rudo rwekudenga.
Rugare rwako ngaruve nesu tese.
Munamato kuMutumwa mukuru Raphael kukumbira kuporeswa kwechirwere
«S. Raphael, ane zita rinoreva "chiremba waMwari," iwe, uyo akapomerwa kuperekedza mudiki Tobias parwendo rwake kuenda kunyika yeMedhia, uye uyo paakadzoka akarapa upofu hwababa vaTobias.
Mutsvene Raphael, Iwe akabatsira uye wabatsira baba vaTobias kuita kuti zvishuvo zvavo uye zvishuwo zviitike, tinokukumbira uye ubvunze kubatsirwa kwako.
Iva mudziviriri wedu pamberi paMwari, nekuti iwe ndiwe chiremba wechiano unotumira akatendeka.
S. Rafael, ndiporese chero chirwere.
Gara uchiita kuti ndive noutano, nekuti isu hatisi kumira kukurwira. Ndatenda
Namata kuna Baba Vedu, Kurumbidza Maria uye Creed.
Namata kuna Mukadzi Wedu weFatima kukumbira hutano.
“Mukadzi waFatima, mai vanoda vese vevanotambura mumuviri nemweya.
Chengetedza hutano hwevana vako, regedza maronda nekutambura kunotitambudza uye kutikanganisa uye kutinetesa.
Kumbira Mwanakomana wako anodikanwa uyo akaporesa vanhu vazhinji vanorwara nenzira yenguva yake, kuti atinzwire tsitsi, ave simba redu. Kutambura kwedu ngakuve kwake. Mwari vatipe hutano kuti tigare tichimushandira, kuti titarisane. Asi pamusoro pezvose uye nguva dzose, kuti kuda kwaMwari Baba kuitwe, anotichengeta nerudo rusingaperi uye nehunyoro husingaenzaniswi. Titore ruoko, amai Vanodiwa, uye muende nesu kuna Jesu.
Kukosha kwemunamato wekuporesa
Kana tichirwara, kungave kwenyama, pamweya kana kwepfungwa, isu tinogumira pakuora mwoyo. Uku kurwadzisa kunotirova isu kana paine mudiwa ane hutano hutano. Munguva idzodzo, kuziva kuti tine mumwe munhu wekutendeuka kuzotizorodza.
Mwari haambofa akasiya vana vake. Naizvozvo, kukosha kwe munamato wekuporesa ndewekuti unotipa nyaradzo. Munamato uyu unounza kudzikama netariro munguva dzino dzakaoma.
Nguva zhinji tinozviwana pamberi paMwari tisingazive kuti tokumbira kuporeswa kwedu, mutauro wei wekushandisa. Munamato wekuporesa unounza mazwi akakodzera ekuti, kana ataurwa nekutenda, ave nesimba rakakura kutipodza.
Nakidzwa nokunyudzwa mumunamato wekuporesa kuti utore hutano hwako nekukurumidza uye dzidza zvakawanda nezve ese marudzi eChitatu aripo.